Wararka Maanta: Sabti, Sept 15, 2012-AMISOM oo sheegtay in ciidamadeeda iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ay la wareegeen Deegaanka Biibi ee Gobolka Jubbada Hoose
AMISOM ayaa sheegtay in howgal ay sameeyeen ciidamadooda iyo kuwa Somalia ay ku qabsadeen deegaankaas oo ay ku sheegeen mid muhiim ah, inkastoo aysan jirin war arrintan ku saabsan oo weli kasoo baxay dhinaca Xarakada Al-shabaab.
"Howlgal 12:30 duhurnimo ee Jimcihii la fuliyay ayaa lagu qabsaday deegaankaas oo isku xira deegaanka Bilis-Qooqaani iyo degmada Afmadow, sidoo kale waxaan ku furannay hub iyo rasaas, saddex askarta Soomaaliya ka tirsanna waxaa kasoo gaaray dhaawacyo fudud," ayaa lagu sheegay warka kasoo baxday Al-shabaab.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Jubbada hoose ayaa sheegay in dagaalkaas lagu dilay afar qof oo ka tirsan xoogagga Al-shabaab, kuwaasoo ay ku jireen saraakiil hoggaaminayay dagaalka.
Taliyaha guud ee ciidamada AMSIOM, Jen. Andrew Gutti oo hadlay ayaa sheegay in qabsashada deegaanka Biibi ay tahay mid ay ku adkeynayaan ammaanka dadka ku nool deegaankaas iyo kuwa ku dhow.
"AMISOM waxaa ka go'an inay taageerto shacabka Soomaaliyeed si ay dalkooda dib ugu dhistaan," ayuu yiri taliyaha AMISOM oo intaas ku daray: "Waan sii wadaynaa taageeradaas, waxaana intii aan awoodno ku bixin doonnaa sidii ay shacabku u arki lahaayeen riyooyinkooda ah inay ku noolaadaan nabad galaan falalka argagaxisada.
Ciidamada AMISOM ee ku sugan gobollada Jubbooyinka ayaa waxay ka socdaan dalka Kenya, kuwaasoo si rasmi ah ugu biiray howgalka Midowga Afrika bishii Abriil ee sannadkan, kaddib markii uu heshiis dhexmaray dowladda Kenya iyo Midowga Afrika.